आठ वर्षदेखि बालबच्चा सोधिरहन्छन्ः बाबा यसपालि पनि घर नआउने ? , १६ असोज २०७६
यसरी बन्याे हिन्दुले पुज्ने देवीको तस्वीर रवि बर्मा भारतका पहिलो चित्रकार हुन जसले देवी देवतालाई सामान्य मान्छेको रुपमा चित्रित गरे । उनी देवीका चित्र बनाउँदा प्रेमिका सुगन्धालाई अगाडि राखेर चित्र बनाउँथे । सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा र कृष्ण उनले बनाएका प्रख्यात चित्र हुन , १६ असोज २०७६
गाउँ भरिए, शहर रित्तिए दशैं तिहार नजिकिदैँ गर्दा प्रायः कर्णालीका शहरहरु रित्तिदै गएका छन् । शहरहरु रित्तिदै जादाँ गाउँहरुमा भने भरिदैँ गएका छन् । कर्णालीका प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र जिल्लाका सदरमुकाम तथा बजारहरु अहिले सुनसान हुन थालेका छन् । गाउँमा मानिसको चहलपहल बढ्न थालेको छ १६ असोज २०७६
हुनेलाई उल्लास, नहुनेको सधैं घरझगडा लमजुङको चितीबाट पोखरा आउँदा उनका सपना थियो– ‘पति–पत्नी दुवै पोखरा बसेर मजदुरी गर्ने, छोराछोरीलाई राम्रोसँग शिक्षादिक्षा दिने र कमाईबाट बचेको पैसाले एउटा सानो घर बनाउने ।’ तर उनले पोखरा भित्रदा देखेको सपना सपना मै सिमित बन्यो १७ असोज २०७६
सडकमै दसैं मनाउनेहरू १७ असोज २०७६
दसैंमा स्वस्थ रहने उपायः जिब्रोलाई नियन्त्रण ! दसैं खुशी र उमंगको चाड । दसैंमा रमाइलो गर्ने, खाने पिउने हो । यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, उत्साहमा हामीले स्वास्थ्यमा त्यति ख्याल राख्दैनौं । , १८ असोज २०७६
फल्यासब्याकमा दसैं तुलसाको मोठ टाल्ने जिम्मा मेरो, पेटी र करेसो बैनीहरूलाई, भाइ काम गर्न नसक्ने भए पनि जिम्मेवारी नपाए बाउँठिन्थ्यो । उसलाई माटोको डल्लो पार्ने र पानीको जिम्मा । १८ असोज २०७६
दसैंलाई धार्मिक लेपले विवादित बनाइयो शायद त्यसमा आर्थिक–सामाजिक कुरा पनि जोडिएको थियो होला । ठूलो तडकभडक गर्न ठूलै रकमको आवश्यकता पर्छ । दक्षिणा मात्रै दिँदा पनि कति धेरै खर्च हुन्छ ! यसले पनि केही मानिसले त दसैं मान्न छाडेका हुन् । , १८ असोज २०७६
जंगबहादुरका मामा माथवरसिंहको महाअष्टमी प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापा एक हातले बाह्र धार्नीको बोको मार हानेर चटक्कै छिनाउथे भने अर्को हातले मुठीभरी राखेको हाडे ओखर मरक्कै पार्थे । इतिहासकारले उक्त प्रहारको नाम ‘माथवरसिंहको मार’ दिएका छन् , १९ असोज २०७६
यसरी बनाउनुस् खसी र कुखुराका तीन परिकार राजसिक खानाले शरीर र दिमागमा उत्तेजना बढाउँछ । यो खानाको फाइदा बेफाइदा दुवै हुन्छ । खुशीको भाव जगाउन प्रेरित गर्ने भएकाले अधिकांशले राजसिक खाना प्रयोग गर्छन् । यो खाना बिरुवा र जनावबाट प्राप्त हुन्छ , १९ असोज २०७६
सरकार ! आफ्नै देशमा दसैं कहिले मनाउनु ? परदेशमा बस्न मन नभए पनि बाध्यताले साहुको ड्युटी गर्नुका पीडा उनीहरूका आँखामा प्रस्टै देखिन्थे । ठूलाठूला अपार्टमेन्ट, भवनको एक गेटमा रातदिन बिताउनेहरू विगतमा गाउँघरमा चङ्गा उडाएको, पिङ खेलेको, खसी ढालेर रमाइलो सम्झदै काममा ब्यस्त छन् , १९ असोज २०७६
जेलभित्र यसरी मनाइन्छ दसैँ आफन्तसँगको भेटघाटमा समेत दसैंको समयमा अरू बेलाको तुलनामा सहज भेटघाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दसैं खर्च भनेर सरकारले समेत प्रत्येक कैदीलाई ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । देशभर रहेका ७४ कारागारमा २० हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी रहेका छन् । , २० असोज २०७६
यसरी मनाउँदैछन सुरक्षाकर्मीले दसैँ किन आउँछ दसैंतिहार किन बिदा बार फौजीलाई कुन हो दसैं कुन हो चाड तिहार , २० असोज २०७६
सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मीक शक्तिपीठ घटालमा दसैंको मेला देउताको प्रभाव र शक्तिलाई कसैले चुनौती दिए भने मूल धामीले आफूले बालुवा खानुका साथै अरू धामीलाई पनि बालुवा खुवाएर शक्ति देखाउने गर्छन् २० असोज २०७६
यसरी मनाउँदैछन रंगकर्मीले दसैं दसैं कलाकर्मीका लागि विशेष रहन्छ । तर, कतियपय कलाकारहरूले दसैं परिवारसँग बसेर मनाउन पाएका हुँदैनन् । कतिपय कलाकार चाहिँ वर्षैभर ब्यस्त भए पनि दसैं र तिहार परिवारसँग बसेर मनाउने इच्छाले यस्ता कार्यक्रमहरू रद्द गरेका हुन्छन् । कतिपय बाध्यताले पनि कार्यक्रममै पुग्नुपर्ने हुन्छ । ब्यस्त भनेर चिनिएका कलाकारहरूले यसपटकको दसैं कसरी मनाउने योजना बनाइरहेका छन् , २० असोज २०७६
दसैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य र सामन्ती शैलीको टीका ! राज्यका कुनै पनि सर्वोच्च पदाधिकारीको व्यक्तिगत श्रद्धाका आधारमा खास आराध्यदेवप्रति श्रद्धा हुनसक्छ वा पटक्कै नहुन सक्छ । श्रद्धा नभए समस्या नै भएन । यदि छ भने उनले आफ्नो श्रद्धा भएको आराध्यदेवको व्यक्तिगत हैसियतमा सर्वसाधारणझैँ भएर दर्शन वा पूजापाठ गर्न सक्छन् । २५ असोज २०७६
कर्णालीमा थप ३५ संक्रमित, संक्रमित संख्या २३३ पुग्योे